Ndi saịtị gị na-ekwu "Na-aga"? | Martech Zone
Monday, July 26, 2010 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
Mgbe m na ụfọdụ ndị ọkachamara SEO na-arụ ọrụ, ha na-agbanye mpịakọta ọchụchọ kachasị elu ma ọ bụ okwu asọmpi kachasị. Mgbe m na-arụ ọrụ na mgbasa ozi ọdịnala, ha na-agbanye bọọlụ anya ma rute. Mgbe mụ na ụmụ nwoke na-elekọta mmadụ na-arụkọ ọrụ, ha na-atụkarị ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso ụzọ ha. Mgbe mụ na ndị nrụpụta na-arụkọ ọrụ, ha na-achọ imepụta maka obere mkpebi.
Anaghị m ege ha ntị.
Ahịa abụghị maka ịkọwapụta aha ala dịkarịsịrị ala iji bulie ikike nke iru ma ọ bụ nkesa. Dịka onye na-azụ ahịa, oge ụfọdụ mkpọsa ahụ nwere ike ịbụ ịchọpụta otu akụ ma ọ bụ influencer iji kpọọ aha ziri ezi. Ọ dabere na ikike ha, oge oge mkpọsa ahụ, yana ndị na-ege ntị anyị chọrọ iru. Mgbe ụfọdụ, nke ahụ abụghị nke denominator ma ọlị - ọ bụ ihe wacky, etinye nke ọma ma lekwasị anya maka otu ebumnuche.
M na-emebi iwu.
Saịtị m na-emebi ọtụtụ iwu. Otu onye gosipụtara na, agbanyeghị na m na-agwa ndị ahịa m ka ha chepụta saịtị nwere nnukwu mkpụrụedemede dị iche na ncha ọkụ, nke anyị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ Ejiri saịtị gbara ọchịchịrị na mkpụrụedemede ọkụ light siri ike ọgụgụ karịa. Ndị enyi ndị ọzọ ekwuola na ọ naghị adabara na laptọọpụ obere mkpebi.
Nke bụ eziokwu bụ na achọghị m iji akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ laptọọpụ ndị okenye dọta ndị ọbịa. Achọrọ m ilebara ndị nwere nnukwu mkpebi anya. Achọghị m ka m dọta ụlọ ọrụ ndị na-agaghị nweta nkwalite na Internet Explorer 6. Achọghịdị m ka ndị mmadụ gụọ saịtị m. Achọrọ m ka ha na-agagharị na ya ma na-eche ma m nwere ike inyere ha aka… ma mee ka ha pịa ebe nrụọrụ weebụ dị.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị, ị bụghị olile anya m.
Enwere m ọnụego bounce dị elu. Ọ dị mma. Achọghị m ka ọnụego dị ala dị ala. Achọrọ m ịdọta ọtụtụ ndị ọrụ njin ọchụchọ, mana achọrọ m ka ndị ahụ nwee mmetụta ozugbo ma hapụ ma ọ bụ jikọọ. Anaghị m abanye na nnukwu nkọwa banyere ihe anyị na-eme maka ụlọ ọrụ… nke ahụ bụ n'ihi na anyị nwere mmasị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ ọ bụla. Ebumnuche nke saịtị m bụ ime ka ọtụtụ ndị mmadụ ghara iru eru ma kpalie ndị ọzọ iji jide anyị.
N'ezie, blọọgụ a dị iche. Anyị na-agabigharị na ọnwa ọzọ iji meziwanye iru na nkesa nke saịtị ahụ, yana ịdọta ọtụtụ ndị ọbịa. Ihe mgbaru ọsọ anyị na ego anyị ga-enweta na-erite uru mgbe anyị ruru ọtụtụ ndị ọbịa. Anyị ka ga-etinye ụfọdụ atụmatụ imepụta nke kachasị nke ndị ọrụ ọkaibe karịa, mana anyị achọghị ịbe ndị na-ege anyị ntị.
Ebe nrụọrụ gị ọ na-ekwu "Na-apụ apụ"? Nke ahụ dị mma!
Marketingzụ ahịa n'ịntanetị abụghị mgbe niile banyere iru ọtụtụ mmadụ dịka i nwere ike, oge ụfọdụ ọ bụ maka ịkụda ndị na-ege ntị na-ezighi ezi. Ọ bụ ya mere m ji bụrụ onye mmegide nke iji usoro dị ka Digg maka saịtị ụlọ ọrụ. Ọtụtụ oge, ha na-eli saịtị naanị ma kpatara nsogbu ọrụaka na-agbakwunyeghị onye ọbịa dị mkpa.
Enwere ụfọdụ ihe ị ga - eme iji dọta ma dọpụ ndị na - ege ntị na saịtị ma ọ bụ blọọgụ gị. Atụla egwu imebi iwu.
Jul 27, 2010 na 11: 46 AM
Nke a bụ ihe m hụrụ n'anya banyere ntanetị na azụmaahịa ụwa, naanị iwu bụ na enweghị iwu! Ọ bụrụhaala na ebubere ebumnuche, a na-achọpụta na ọganiihu na nsonaazụ dị mma, kedụ ihe ọzọ dị mkpa?
Doug, ihe m na-asọpụrụ banyere gị bụ enweghị atụ gị n'ịkwụ ọtọ na inye echiche gị. Ọ na-eme ka ndị mmadụ chee echiche nke ọma, nke ahụ bụ ihe kachasị mma maka imepụta ihe ịga nke ọma mmadụ nwere ike ịrịọ.
Jul 27, 2010 na 3:27 PM
Daalụ Harrison - ị kwuru eziokwu. Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ dị mkpa.